Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 107 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
DAAWO : Mujaahidiin kasoo jeeda Qooqaaz oo Farriimo u diray Dowladda Ruushka.
Mujaahidiinta Jabhatu Nusrah ayaa baahiyay Filim Muuqaal ah oo cinwaan looga dhigay “Shaam..Qubuurihii soo duulayaasha”, iyadoona lagu soo bandhigay tababarro Meliteri oo la siinayo dagaalyahanno Mujaahidiin ah oo kasoo jeeda Dowladaha kuyaalla Mandiqadda Qooqaaz. Tababarayaal Mujaahidiinta Jabhatu Nusrah ka tirsan ayaa bixinayay duruus ku aadan qaab dagaalkeeda Ciidamada Dowladda Ruushka, […]
Faah faahin kasoo baxeysa diyaarad kusoo dhacday duleedka degmada Afgooye.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya diyaarad nooca yar yar ah oo gelinkii dambe ee maanta kusoo dhacday deegaanka Cusmaan Duurre ee duleedka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose. Ilo wareedyo ka tirsan Dowladda Fedraalka ayaa Warbaahinta Soomaalida u sheegay in diyaaraddaas ay iska leedahay Dowladda Mareykanka, islamarkaana ay kasoo […]
Maleeshiyaad Shiico ah oo Boqollaal ruux ka qafaashay Gobolka Tikriit.
Maleeshiyaadka Rawafidda ayaa falal isugu dil iyo afduub waxay ka geysteen deegaanno kuyaalla duleedka magaalada Tikiirt, Gobolka Salaaxu diin ee Waqooyiga dalka Ciraaq. Ilo wareedyo ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay Maleeshiyaadka Xashdu-Shiiciga ah ay afduubteen inkabadan 200 oo ruux oo Muslimiin ah oo deegaanadaasi ku noolaa, iyadoona qaar ka […]
Daalibaan oo ku goodisay inay sii wadeyso Dagaalka Jihaadka ah.
Amiirka Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan Al-Mulla Ikhtar Mansuur ayaa soo diray Farriin Maqal ah oo arrimo kala duwan uu kaga hadlay, iyadoona farriintiisii lagu faafiyay baraha Internetka ee Imaarada. Sheykh Al-Mulla Ikhtar Mansuur ayaa kalimaddiisa waxa uu ku sheegay in Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ay ka go’antahay […]
Ciidamada Mujaahidiinta WI Ee Jubbooyinka oo weeraray degmada Badhaadhe.
Ciidamada Mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa weerar xooggan ku qaaday fariisimaha Ciidamada ka socda Dowladda Kenya ay ku leeyihiin gudaha degmada Badhaadhe. Saqdii dhexe ee xalay ayay Ciidamada Mujaahidiintu qaadeen weerarkaasi, waxaana lasoo sheegayaa in rasaasta iyo madaafiicda ay ku hoobatay dhufeysyada Ciidamada Kenyaatiga ee halkaas ku sugan. […]
Boqollaal ruux oo ku dhintay Dhul gariir ka dhacay dalalka Afghanistan iyo Pakistan. (Sawirro)
Boqollaal ruux ayaa dhimatay, kadib markii dhul gariir cabirkiisa lagu qiyaasay 7.7 Richter Scale uu ku dhuftay gobollo ka tirsan dalalka Afghanistan, Pakistan iyo India. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay in dad ka badan 180 ruux ay dhinteen, inkabadan kun ruuxna ay ku dhaawacmeen Gobolka Kheybar ee Waqooyiga dalkaasi, iyadoo la […]
Diyaaradaha Dagaalka Ee Yahuudda oo duqeeyay Magaalada Gaza.
Diyaaradaha Dagaalka ee Yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geystay magaalada Gaza ee dhulka Filastiiniyiinta. Duqeynta ayaa timid markii Sawaariikh lagu garaacay qeybo ka tirsan dhulka Yahuuddu xoogga ku heysato ee soo xiga dhanka Gaza. Weriye ka tirsan Tv-ga Aljazeera ayaa soo sheegay in diyaaraduhu ay […]
DAAWO : Mujaahidiinta Shaam oo Farriin kulul u diray Dowladda Ruushka.
Jamaacada Jabhatu Nusrah ayaa tababaray usoo xirtay Boqollaal ka tirsan Ciidankeeda, kuwaas oo ka qeyb qaadan doona dagaalka ka socda dalkaasi ee lagu doonayo in lagu rido Nidaamka Bashaar Al-Asad. Mucaskarka Abul-Waliid ASh-Shaami ee kuyaalla Gobolka Laadiqiyah ayay Jamaacada Jabhatu Nusrah tababar muddo soconayay ugu soo gaba gabeysay Ciidmadaasi. Farriimo […]
DHAGEYSO : Sh Xamad Bin Xamuud At-Tamiimi oo ku baaqay in la difaaco Masjidka Al-Aqsa.
Sheykh Xamad Bin Xamuud At-tamiimi oo ka tirsan Culimada Mujaahiinta ee dalka Yemen ayaa jeediyay Kalimad aqal ah oo Muslimiinta uu ugu baaqayo inay difaacaan Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Mu’assasada Al-Malaaxim ee warbaahinta u qaabilsan Mujaahidiinta Al-Qaacidda ee Jaziiratul Carab ayaa baahisay kalimaddan. Maalmo ka hor ayaa kalimad tan la […]
Faah faahin kasoo baxeysa dagaal ka dhacay degmada Baardheere.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo Ciidamada Mujaahidiinta ay habeen ka hor ku qaadeen degmada Baardheere ee wilaayada islaamiga ah ee Gedo. Ciidamada Mujaahidiinta ayaa waxay weerareen saldhigyo ay Ciidamada Xabashida ku leeyihiin gudaha iyo duleedka magaaladaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee halkaas laga helayo ayaa waxay sheegayaan […]